Niala tamin’ny maha mpitantana Lingua · Global Voices teny Malagasy
Niala tamin'ny maha mpitantana Lingua
Voadika ny 31 Desambra 2021 3:18 GMT
Manana vaovao hozaraina aminareo aho. Hiala amin'ny maha mpitantana ny Lingua ahy aho amin'ny faran'ny taona. Hanatevin-daharana ny IFEX amin'ny toeran’ny Network Engagement Specialist aho izay hanomboka ny 10 Janoary. Tsy mora ny fanapahan-kevitra noraisina, mbola eo am-pikarakarana izany aho, saingy tonga ny fotoana. Midika hoe miala amin'ny fikambanana iray matetika ny fametraham-pialana, saingy ny ahy dia ny fampihenana ny fotoanako fotsiny ihany rehefa avy niasa feno nandritra ny folo taona aho. Tonga ny fotoana ho an'ny maso vaovao hanara-maso ny Lingua, miaraka amin'ny hevitra vaovao. Na dia sarotra aza izany, saika toy ny fisarahana rehetra, dia heveriko fa izao no fotoana mahasalama.
Araka ny fantatry ny maro aminareo, niditra ho mpilatsaka an-tsitrapo tato amin'ny GV aho tamin'ny taona 2009 fony aho mbola mpianatra oniversite, nandika teny avy amin'ny teny Anglisy ho amin'ny teny Arabo, niakatra ho Mpitantana ny Fandikan-teny Lingua Arabo, Mpandrindra ny Lingua, ary farany Mpitantana ny Lingua. Nihaona tamin'ny maro taminareo eran'izao tontolo izao. Tena dia lavitra ilay izy. Nivoatra be aho, ho ahy manokana sy amin'ny maha-matihanina, nianatra avy taminareo tsirairay avy! Nianatra nanaiky ny fahasamihafan'ny olona aho. Nianatra nifandray tamin'ny alàlan’ny fitovitoviana ihany koa aho; amin'ny kolontsaina, fiteny, hatsaram-panahy, ary tamin'ny fotoan-tsarotra. Afa-po tanteraka aho tato amin'ny GV, ary mbola hitohy izany, ilaiko ny mbola ho anisan'ity vondrom-piarahamonina ity izay ahatsapako fahazoana aina sy fahatokiana.
Tsy hijanona ny diako miaraka amin'ny GV. Mbola hisolo tena anareo ao amin'ny biraom-pitantanana aho raha mbola azoko atao. Hiverina mavitrika ao amin'ny ekipa mpitantana ny Lingua Arabo ihany koa aho rehefa afaka fotoana fohy. Mbola misokatra ho an'izay manam-panontaniana rehetra, na fanamarihana, na fanenjehana izay zavatra tsy tratra aho. Fantatrareo ny toerana hahitana ahy!
Mendri-pisaorana avokoa ny olona maro ato amin'ny vondrom-piarahamonina. Ireo ekipa fototra mpiara-miasa amiko, noho ny fahatontosako ny zava-dehibe rehefa nanatona ahy izy ireo hanampy amin'ny fitantanana ny Lingua. Hanana toerana manokana hatrany ao am-poko ny Mpitantana ny Fandikan-teny Lingua, hahatonga ny Lingua hisy miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina Lingua ankapobeny ary hampivelatra amin’ny lafiny rehetra ny fiteny mandritra ny taona maro. Manao izay mampiavaka ny Lingua ianareo! Tsy misy toa anareo na aiza na aiza, na ankehitriny, na teo aloha. Nahafantatra olona maro aho tao amin'ny Advox, ary nianatra traikefa maro niorina tamin'ny maha-bilaogera tranainy ahy tamin’ny fifantohana tamin'ny Zon'Olombelona. Rising Voices, izay nahitako fa maro ny zava-mitranga eran-tany, nahatsapako ny tsy fitovizan-kevitra goavana teo amin'ny herin’ny fahefana izay iaretantsika isan'andro, izay ny firaisankina no zava-dehibe amin'ny alalan'ny fahatakarana, sady mikatsaka ny hahalala izay tsy fantatsika ary manampy amin'ny filazana izany amin'izao tontolo izao.
Voninahitra sy fifaliana ho ahy ny niara-niasa taminareo nandritra ny taona maro. Misaotra anareo indrindra!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 13 ora izay